Knolling: waa maxay | Hal-abuurka khadka tooska ah
Knolling: waa maxay
Encarni Arcoya | | Sawir
Sawir qaadista gudaheeda waxaa jira farsamooyin, xeelado iyo farsamooyin badan si loo gaaro natiijo xirfad badan oo cajiib ah. Knolling, oo ah laanta sawir qaadista, ayaa kor u kacaysa laakiin dad badan ma garanayaan sida saxda ah waxa ereygan loola jeedo.
Sababtan awgeed, waxaanu samaynay xog ururin si aad u ogaato waxa aan ka hadlayno iyo, dhammaan ka sarreeya, si aad fikrad u hesho waxa farsamada ay tahay, sida loo sameeyo iyo tusaalooyin wax ku ool ah. U tag?
1 Waa maxay jilib
1.1 Waa maxay asalka farsamada
2 noocyada garaacista
3 Sida loo tababaro qoriga
4 Farshaxanno kale oo u adeegsan jiray knolling shaqadooda
5 Sida loo isticmaalo si loo soo bandhigo mashaariicda
Waa maxay jilib
Marka hore aan ku bilowno. Tanina waxay si fiican u fahmaysaa fikradda knolling-ka. Laakiin waxaan u sameyn doonaa si wax ku ool ah. Gal Amazon ama Aliexpress oo raadi qalab qalab ah.
Waxa ugu badbaado badan ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah sawiradu ay ku tusinayaan daboolka ama bacda oo ay ku xigaan dhammaan alaabooyinka uu xidhmoku sido, sax? Waa hab muuqaal ah oo lagu tuso macmiilka suurtagalka ah wax kasta oo ay heli doonaan haddii ay iibsadaan.
Hagaag, farsamadaa sawir qaadistu midna maahan oo aan ahayn knolling, nooc sawir qaadis ah oo sidoo kale loo yaqaan 'zenithal still life'.
Ujeedada garaaciddu maahan wax kale oo aan ahayn in la soo bandhigo shay taxane ah, laakiin aan loo dhigin qaab aan fiicnayn; caksigeeda, Waa in si wanaagsan loo habeeyo oo xaaladaha qaarkood "la jeexjeexo" si xitaa qayb yar oo iyaga ka mid ah loo arko.
Haddaynu saxno, Mid kasta oo ka mid ah walxaha waa in ay ahaataa 90 darajo midba midka kale; sida hab kaamil ah, cajiib ah, halabuurka asalka ah ayaa la abuuray kaas oo shaki la'aan soo bixi doona.
Waa maxay asalka farsamada
El abuuraha farsamadan sawir qaadista midna maahan Andrew Kromelow, ilaaliye go'aansaday inuu dalbado dhammaan maacuunta istuudiyaha dhismaha ee Frank Gehry si shaqada loogu fududeeyo shaqaalaha. Haddaba waxa uu sameeyay waxa uu ahaa in uu isu geeyey dhammaan qaybaha isaga oo u habeeyey cabbir ahaan, qaab ahaan, iwm. oo mid walba u habeeyey xagal 90 darajo ah.
Sida cad, wuxuu ka tagay tilmaamo taxane ah, taas oo ah sababta la og yahay in uu ahaa Kromelow laftiisa oo ku baabtiisay farsamadan sida knolling, oo uu caddeeyey wax kasta oo uu sameeyay, iyo sida uu u sameeyay, taas oo la yaabay naqshadeeyaha. Laakin waxa hubaal ah in ay ka caawisay in uu aad u abaabulo maalintaas wixii ka dambeeyay.
Sannado ka dib, Tom Sachs, oo ah farshaxaniyihii la shaqaynayey Gehry, ayaa loo soo bandhigay knolling-ka wuxuuna go'aansaday inuu qaato fikradda farsamadaas si uu u abuuro halabuur si gaar ah u qurux badan. Run ahaantii, waxa la og yahay in fannaankani uu farsamadan u adeegsan jiray shaqadiisa isaga oo ku abuurayay qoraal, ‘Always be knolling’ (ABK) halkaas oo uu afartii tallaabo ee ay ahayd in la raaco uu ku fuliyo.
Hadda oo aan caddaynay waxa ay tahay knoling iyo asalkeeda farsamadan, waa in aad ogaataa in horumarkeeda. Laba nooc oo gallin ah ayaa soo baxay:
Midda isu keenta canaasiirta kala duwan balse ku xidhan fikrad ama fikrad. Tusaale ahaan, xirmada qalabka ee aan horay uga soo hadalnay, kaas oo kuu oggolaanaya inaad haysato qalabyo kala duwan (maqasyo, xargo, majarafad, iwm.)
Midda ku salaysan 'gutting'. Tusaalaha noocaan ah wuxuu noqon karaa kombuyuutar aad 'kala go'day' gabal-goob, oo muujinaya wax walba ilaa tafaasiisha ugu yar (chips, skru, goysyada, fiilooyinka...).
Sida loo tababaro qoriga
Sidii aan hore kuugu sheegnay, Tom Sachs waxa uu soo saaray manifesto afar-dhibcood ka kooban oo qeexaya sida knolling-ka loo samaynayo. Qodobadaasina waa:
Soo hel agabka, agabka, buugaagta... ee aad guriga ku haysato oo aan la isticmaalin.
Tuur waxa aan la isticmaalin, xitaa waxa naga dhigaya kalsooni darro in la isticmaalo iyo in kale.
Inta soo hartay walxaha waa in lagu kooxeeyaa xiriir. Taasi waa, waa inaad heshaa xiriir ka dhexeeya mid kasta oo iyaga ka mid ah. Taasi waxay naga dhigi doontaa inaan abuurno kooxo.
Hadda, koox kasta, waa inaad ku dhejisaa dhammaan walxaha xaglaha saxda ah, iyo had iyo jeer dusha sare.
Farshaxanno kale oo u adeegsan jiray knolling shaqadooda
Tan iyo markii farsamada garaacista la abuuray, ilaa 1897, waxaa jiray farshaxanno badan oo fuliyay marka lagu daro Tom Sachs.
Tusaalooyinka tani waxay noqon kartaa Todd McLellan, Austin Radcliffe, Ursus Werli ama Emily Blincoe. Dhammaantood waxa ay wataan buugaag aad ka heli karto tusaaleyaal badan oo ku saabsan halabuurkooda faneed, sawirradooda iyo farshaxanno kale oo ay ku talaxtageen.
Dhab ahaantii, waxaa jira kumanaan sawiro, ama malaayiin iyaga ka mid ah, kuwaas oo ka tarjumaya halabuurkan oo noqon kara mid aad loogu guuleysto marka ay timaado iibinta eCommerce, ama la shaqeynta calaamadaynta si ay u soo bandhigaan naqshadaha suurtagalka ah ee macmiilka.
Sida loo isticmaalo si loo soo bandhigo mashaariicda
Hal-abuur ahaan, marka mashruucu kuu yimaado, waa inaad fikradaada u soo bandhigtaa sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah macmiilkaas. Mararka qaarkood qaar badan oo ka mid ah mashaariicdaas ayaa kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto hareeraha wax yar.
Tusaale ahaan, qiyaas in aad leedahay saaraha macmiil ahaan. Samaynta matalaad tafatiran ee dhammaan qaybaha ay alaabtu leedahay waxay kaa caawin kartaa inaad siiso aragti asal oo dheeraad ah macaamiishaada. Isla mar ahaantaana, adoo matalaya wax badan, si nidaamsan iyo hay'ad millimetric ah, waxay u taagan tahay wax badan oo ka badan haddii aad kaliya tustay qaar ka mid ah sawirada alaabta laga soo qaado dhammaan xaglaha suurtagalka ah.
Tusaale kale ayaa noqon kara summadeynta ayaa shaqeysa. Marka lagu weydiiyo calaamad ama naqshadeynta astaanta shakhsi ahaaneed, oo muujinaysa dhowr walxood oo leh astaantaas, sida nooc ka mid ah majaajilada, laakiin lagu dalbado farsamada garaacista ayaa siinaya hawo xirfad leh. Xitaa haddii aysan kuu sheegin inay rabaan inay ku siiyaan "waaqiciga", ama inay u isticmaali doonaan xafiiska ama walxaha baayacmushtarka, ka hor intaanay dhicin waxay ka caawin kartaa inay si fudud u arkaan natiijada oo ay ku xidhmaan shaqadaas. sameeyey.
Haa, U diyaargarow inaad yeelato taliye ku habboon oo hubi in dhammaan walxaha si wanaagsan loo habeeyey loona habeeyey 90 darajo si sawir-qaadista iyo naqshadda ugu dambeysa ay u helaan natiijada aad filayso.
Hadda ma kuu caddaaday waxa ay tahay gallintu?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Knolling: waa maxay
Waa maxay naqshadeynta garaafyada?
Calaamadaha ugu yar ee dhiirigelinta